एनसेल – ताजा समाचार
एनसेलले ल्यायो ‘भ्यालेन्टाइन अफर’, प्रतिमिनेट १८ पैसामा कुरा गर्न सकिने…
काठमाडौं ।एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकले आगामी भ्यालेन्टाइन सिजनमा आफ्ना प्रियजनसँग असिमित कुराकानी गर्दै फाइदा लिन सक्ने भएकाछन् । नजिकिदै गरेको प्रणय दिवसको अवसरमा एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि ‘अझै नजिकिन्छ सम्बन्ध’ योजना अन्तर्गत ‘भ्यालेन्टाइन अफर’ ल्याएको छ । यो अफरमा ग्राहकले मात्र १०० (कर सहित मात्र १२७.६९) मा ७०० मिनेट अन नेट टक […]
एनसेललाई अर्बौं छुट दिने सर्वोच्चको फैसलामा न्यायाधीश माथेमाको ‘असहमति’
अशोक अधिकारी । नेपालन्यूज डटकम सर्वोच्च अदालतले गरेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा गरेको फैसला संयुक्त इजलासमै रहेकी एक न्यायाधीशले फरक मत राखेकी छिन्। सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले छुट्टै राय प्रस्तुत गरेकी हुन्। ‘आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्ने क्रममा खडा गरिएका निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरुमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा भएका व्याख्या […]
काठमाडौं । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको फरक मतका बीच सर्वोच्च अदालतते एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उक्त ठहर गरेको हो । सर्वोच्चका अनुसार ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ […]
माग्ने बुढा भन्छन – के खाउँ के लाउँ भन्ने गरिब जनताले कर तिर्नुपर्ने, एनसेलले कर तिर्नु नपर्ने ?
सर्बोच्च अदालतले बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलबाट पुँजिगत लाभकर असुल नगर्ने आदेश दिएपछि यो बिषयमा राजनैतिक दलका प्रभावशाली नेता, सांसद हुँदै अब सार्वजनिक छवि बनाएका कलाकारले पनि आफ्नो मुख खोलेका छन् । यसै क्रममा चर्चित हास्य कलाकार केदार घिमिरे माग्ने बुढाले पनि मुख खोलेका छन् । चर्चित हास्य कलाकार घिमिरेले ठेलागाडामा सेलरोटी पकाएर बेच्ने सर्वसाधारणले चाहिँ कर […]
एनसेलको कर छुट दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन नेकपाकै सांसदले गरे माग
काठमाडौँ – राज्यलाई अर्बौं घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरुले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले एनसेलको लाभकरबारे सर्वोच्चले दिएको आदेशमाथि पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च […]
‘कहाँ आयो गणतन्त्र ? प्रचण्डको छोरी र बुहारीलाई मात्र गणतन्त्र आएको हो ?’ – नायिका रेखा थापा
अभिनेत्री रेखा थापा बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने नाम हो । कहिले राजनीति र कहिले अरु नैं कारणले थापाको चर्चा हुने गरेको छ । यो बिचमा राप्रपा नेपालमा रहेकी थापाले सरकार र सिके राउत बिच भएको सहमति लाई ध्यानाकर्षण गर्दै कडा प्रतिकृया जनाएकी छिन । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका केही शब्दहरुलाई लिएर अहिले जताततै टीकाटिप्पणी चलिरहेको बेला अभिनेत्री […]